AHOANA NO HAMAFANA TANTERAKA CORELDRAW X7? - AHOANA NO HANAOVANA - 2019
Ahoana ny fomba hamafana tanteraka CorelDraw amin'ny solosainao
Fampidirana - ity dia mari-pamantarana manokana eo amin'ny kaonty, izay, miaraka amin'ny tenimiafina, dia ao amin'ny tranonkala sy ny fampiharana rehetra izay mitaky fanomezan-dàlana. Mazava ho azy fa any Odnoklassniki izy, ary anio dia hilaza aminao ny fomba hahafantarana azy.
Fantatray ny anaranay ao amin'ny tambajotra sosialy OK.RU
Hatramin'ny vao haingana, ny anaran'ny mpampiasa dia voatondro ao amin'ny sehatry ny profil, fa ankehitriny dia tsy misy io vaovao io. Ankoatra izany, ny mpamaritra ny kaonty dia miafina any amin'ny toerana izay tsy isian'ny olona eritreretina hitady izany, ary raha tsy izany, dia tsy mahatsiaro izany. Nefa, ny zavatra voalohany aloha.
Alefaso kely ny tranokalan'ny Odnoklassniki kely.
Ampiasao ao amin'ny tranokala misy endri-tsoratry ny tambajotra sosialy Payments and subscriptions.
Manaraka izany, ao amin'ny vondrona "Ao amin'ny kaonty OK"Voamarika miaraka amin'ny môtô amin'ny kitapo, tsindrio ny bokotra "Fandaniana vola".
Amin'ny endriky ny famenoana ny kaonty hita ao amin'ny varavarankely pop up, mandehana any amin'ny tablette "Terminal".
Vakio ny fampahalalana eto ambany ny lisitry ny rafitra fandoavam-bola sy ny terminal. Any amin'ny farany ambany amin'ity varavarankely ity, eo ankavanan'ny marika kely "Ny famandrihana anao handoa ny terminal" ary hisy ny famantarana izay mahaliana antsika.
Tsotra, na dia tsy miraika aza, dia azonao atao ny mahita ny fampidiranao manokana amin'ny tambajotra sosialy OK.RU. Indrisy anefa fa tsy misy safidy hafa ahazoana izany (indraindray) ny fampahalalana ilaina toy izany dia tsy omena. Koa satria amin'ny fitaovana mihazakazaka Android sy iOS, ny karatra mifandraika amin'ny tranok'ity app dia ampiasaina amin'ny fandoavam-bola, ny tab "Terminal" ary ny safidy banky hafa tsy misy finday dia tsy hita ao.
Mifarana amin'ny lahatsoratra. Manantena izahay fa mahasoa ho anao izany ary nanampy ny hahita ny valin'ny fanontanianao. Raha mbola misy fanontaniana mbola momba ny lohahevitra nodinihinay, dia aza misalasala manontany azy ireo amin'ny fanehoan-kevitra.